RAVALOMANANANA MARC : ZAVA-DEHIBE NY FANAPAHAN-KEVITRY NY SADC – MyDago.com aime Madagascar
RAVALOMANANANA MARC : ZAVA-DEHIBE NY FANAPAHAN-KEVITRY NY SADC
Feno hipoka ny kianjan’ny finoana teny amin’ny Magro Behoririka androany ho an’ny vahoaka mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Niavaka ny hetsika satria niditra tamin’ny antso an-tariby teny an-kianja ny filoha Ravalomanana Marc. 3 minitra tsy hidirany ao anaty fiaramanidina hitondra azy ho an’ny Afrika Atsimo, no nanaovany izay antso izay. Nambarany fa vita ny fivorian’ny Sadc Troika taty Maputo ary nihaino antsika izy ireo. Anisan’ny zavadehibe hoy izy dia nankatoavin’ny Sadc ny datim-pifidianana navoakan’ny CENIT sy ONU, fifidianana demokratika no atao noho izany dia faka milatsaka daholo izay te hilatsaka. Tsy maintsy tanterahina ihany koa hoy izy ny fampodiana an’i dada izay ataon’ny Sadc. Hamafisina ny biraom-pifandraisan’ny Sadc aty Madagasikara mba ahafahany manao ny asany.Miantso ny FFKM sy ny Cnosc handray anjara amin’ny fampihavanam-pirenena. Zavadehibe hoy Ravalomanana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Sadc, noho izany misaotra an’Andriamanitra lehibe isika. Misaotra anareo ihany koa hoy izy nitondra am-bavaka ny fivoriana. Nanambara ny tenany fa mbola ho tonga any aminareo ny tatitra avy amin’ny Sadc.
13 réflexions sur « RAVALOMANANANA MARC : ZAVA-DEHIBE NY FANAPAHAN-KEVITRY NY SADC »
Io izany ny vaovao ntsika zanak’i dada
L’ancien président Ravalomanana à Maputo, le 16 août 2012
Par ailleurs, en ce qui concerne le retour de l’ancien président Ravalomanana, et toujours selon M. Adam, « une mission spécifique va être chargée d’évaluer ses implications pour la sécurité et il y a un accord sur le fait que le retour du président Ravalomanana sera réglé de façon à ce qu’il n’y ait pas de menace pour la sécurité de Madagascar, ni de menace pour sa propre personne ».
Misaotra betsaka Atoa Filoha, ary misaotra an’Atra lehibe koa isika!
Tandremo anefa fa mbola mivohy zavatra hafahafa ihany ny mpomba an’i andry RADOMELINA. Nilaza izao ny tao amin’ny Tananews fa hoy hono ny MAE Seychellois hoe « vers des elections sans Andry RADOMELINA et Marc RAVALOMANANA! Dia nanamafy an’izany koa hono i Fransman taorian’ny fivoriana!
Koa samia mailo fa tena misy hevitra mafy tiana ho voizina ao! Tandremonao Atoa Filoha, ary tokony hitandrina koa isika!
Ahoana koa izany hoe. Izay te hilatsaka dia afaka milatska, Taizy no nisy mpanongam-panjakana afaka miltsaka ho fidiana. Ary iza no adala hididy an´i andry radomelina raha izay fampitondraina faisana ny vahoaka sy fanabotriana ny firenena sy fanondranana ny harem-pirenena. dia mbola hisy Alika ve hifidy anío Andry radomelina,
18 août 2012 à 23 h 08 min
On Madagascar, Summit reiterated its previous decision taken during the Luanda Summit in August 2011 and mandated the SADC Mediator in coordination with the Organ Troika to intensify the dialogue with the main Malagasy political stakeholders to implement the Road Map in full and urgently take the necessary measures to ensure a full and urgent implementation of the Road Map as well as to creating a favourable environment for free, fair and credible elections.
Mahazo mody i Dada no dikan’io ambony io satria efa nomen’ny SADC alalana ny « Médiateurs » hanantanteraka haingana ny tondrozotra.Araky ny hevitro dia « dialogue » eo amin’ny Troika sy HAT sisa no faranana satria izany ny SADC efa manaiky ny hodian’i Ravalomanana araky ny tondrozotra.
18 août 2012 à 23 h 41 min
Araky ny vaovao farany hita ao amin’ny tranon-kala ny GTT international dia hiala ao amin’ny tondrozotra hono i Domelina.Tsara fantatr’i lehio fa ny tondrozotra no nametraka azy teo ka raha miala amin’ny tondrozotra izy dia miala ho tsy PAHT intsony izy izany.
Ny dingana manaraka izany izao dia na miala i Rajoelina na faranana ny Troika ny resaka amin’i Rajoelina hilazany fa mody i Dada ary « mody malalaka amin’ny lafiny rehetra tsy misy fepetra »
19 août 2012 à 8 h 35 min
NY ZAVATRA NATOMBOKA TSY MAINTSY FARANANA NA TSY MAINTSY MISY FARANY; NY RATSY ATAO TSY MAINTSY MIVALY KA AIZA RE NY FAHAFAHAN’IZAY MPANAO RATSY E ! KA NA HANDOSITRA AIZA IANAO NA HIAFINA AIZA, MANARAKA ANAO FOANA NY ASANAO NA DIA EFA TSY ETO AN-TANY INTSONY AZA IANAO.
SAMIA MIERITRERITRA TOMPOKO
19 août 2012 à 9 h 19 min
et les dés sont jetés!NAIKA o!ou est dada?revient speed ou miandry ny sitrampon,ny fat?LAZAO NY MARINA FA AZA FITAHANA ZAHAY §ARY KOTOVELO OA MBA AIZA E,?SA LASA I HANTRA NDRAY NY DEBA ETO,?Tsy mitangina soavaly maty marina!efa mitady hirika hialana !
fahafahana dit :
Ity mbola manamafy izay voalaza eo ambony eo ireo. « SADC is adamant that the former leader must be allowed to return home. »
« Regarding the return of Marc Ravalomanana, the position of SADC is the return is unconditional. We cannot prescribe whether he has to stand or not. First he has to return, » Salamao told AFP.
Io no nampipetraka sy tsy nampitabataba andry jeneraly isany
Zavatra telo no tsara ho fantatry ny rehetra dia madio « vierge » ny bulletin n°3 ny casier judiciaire an’i Dada izany hoe tsy meloka izy.
Faharoa dia tsy nanana fahefana ny hitsara an’i Dada ny tribonaly nanao izany.
Fahatelo dia tsy nisy fanadihahadiana ofisialy sy siantifika ny momba ny tranga 26 Janoary sy 7 febroary ireny.
Nitafa an-telefaona mivantana tamin’ireo mpomba azy matetitka i Marc Ravalomanana taorian’ny fihaonanana farany tatsy Maputo. Tsy dia niresaka politika betsaka sy izay mety ho fandehan-draharaham-pirenena, indrindra ny amin’ny fodiany sy ny ho tohin’izay fihaonany farany tamin’i Andry Rajoelina ny Filoha teo aloha tamin’ny sabotsy nandritra ny firesahany tamin’ireo mpanohana azy mitolona etsy amin’ny Magro Behoririka. Karazana kabary fametrahana fitoniana eto amin’ny firenena no nataony ary dia miantso ny rehetra mba hanao tahaka izany koa Ravalomanana. « Miantso antsika hanajanona ny teny fihantsiana sy ny famoahana fota-mandry. Aoka mba ho teny am-pahendrena no ataontsika. » hoy izy. Dia nanamarika mihitsy aza ny Filoha teo aloha fa « tsy misy fampandrosoana azo atao raha tsy tony ny vahoaka. Tsy fotoana hifanaratsiana izao fa fotoana hijerena ny ho avy. Tandremo hoy Ravalomanana fa tsy isika samy Malagasy no hifandrafy sy hifankahala» hoy hatrany izy. Karazany nanome toro-marika ho an’ireo mpanara-dia azy ny momba izany aza ity farany ka nilaza fa « tandremana fotsiny ny fihetsika ».
Na dia an-kolaka ihany aza dia mbola milaza ny ho firotsahany amin’ny fifidianana Filoham-pirenena hotanterahina eto amin’ny firenena ihany Ravalomanana ary toa tena efa mahazo antoka tanteraka ny amin’ny fahafahany amin’izany . « Ho tanteraka ny fifidianana malalaka ary ho afaka haneho ny safidiny ny Malagasy. Tsy misy afa tsy ny safidin’ny vahoaka malagasy ihany » hoy ny fanazavana. Toa efa nanao fampanantenana aza i Marc Ravalomanana ny amin’izay ho fifidianana izay. « Manome toky aho fa tsy maintsy ho tafaverina ny fandriampahalemana, tsy maintsy hatao izay hiverenan’ny zanantsika mianatra. Tonga taty Pretoria ny Ministry ny Raharahambahiny avy amin’ny kaomisiona Eoropeana. Nilaza aho taminy aho fa rehefa mandeha tsara ny fanatanterahana ny tondrozotra dia hiala ny sazy satria mijaly ny vahoaka Malagasy » hoy izy.
Ankoatra izay dia niresaka momba ny fahalaniany indray ho Filoha Lefitry ny fiangonana FJKM ny filoha teo aloha. « Nametraka ny fitokisana tamiko ho filoha mpanampy ireo nanatrika ny Synoda lehibe. Vonona tanteraka aho amin’ny sisa andro iainako hiasa hanasoa ny mpiara-belona. Raha misy ny tsy nety nataoko taminareodia hifonako eo anaterahan’Andriamanitra. Mbola misy iraka tian’Andriamanitra ataoko » hoy izy.
Ny mpandàla ny ara-dalàna kalamina sy manaraka an’izay hafatra napetraky ny Filoha ! Ny foza manohy ny fanaony, mametraka sy manapoaka baomba, ary tsy misy miteniteny na miresaka firy momba izany fandikànan’ilay tondrozotra izany !!
Ny tsy fanakianina an’izany ve anisan’ilay atao hoe : « Mety amin-tsika » koa ?
Précédent Article précédent : RAZAFIMANANTSOA HANITRA : IZAHAY TSY MATAHOTRA FA EFA VITA VAKISINY
Suivant Article suivant : Final 32nd Summit Communique SADC